R/wasaaraha Itoobiya Oo Is Casilay+Sababta Ku Qasabtay Iscazilaada. – Bogga Calamada.com
R/wasaaraha Itoobiya Oo Is Casilay+Sababta Ku Qasabtay Iscazilaada.
Isagoo khudbad ka jeedinayay Telefeshinka Qaranka Itoobiya ayuu sheegay in uu istiqaaladiisa udhiibay golaha isku tagga kacdoonka shacbiga Itoobiya si xal loogu helo qulqulatooyinka naafeeyay dhaqaalaha wadanka islamarkaana kala daadiyay qowmiyadaha Itoobiya ka koobantahay.
R/wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay in kacdoonnada wadanka ka socda ay gallaafteen nolosha kumanaan qof halisna ay geliyeen wax uu ugu yeeray midnimada shacabka Itoobiya “qulqulatooyinka iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee wadanka kajira waxay gallaafteen nolosha Tobanaan qof iyo barakaca kumanaan kale, si xal looga gaaro dhibaatooyinka ayaan ku dhawaaqayaa in aan iska casilay xilka anigoo rajeynaya in nabad buuxda ka islaaxdo wadanka”ayuu yiri Hailemariam Desalegn.
R/wasaaraha Itoobiya ayaa carrabaabay in uu sii heyn doono inta xisbiga talada haya iyo golaha baarlamaanka ay soo magacaabayaan R/wasaare cusub oo isaga bedela, sidoo kale wuxuu iska casilay xilkii guddoomiyaha Xisbul xaakimka wadanka maamula.
Wakaaladda Wararka Reuters ayaa sheegtay in iscasilaadda Haillemariam ay imaanayso maalmo kadib markii uu sii daayay siyaasiyiin mucaarad ah oo lagu eedeeyay in ay hoggaaminayeen kacdoonka dhiigga badan ku daatay ee wadanka ka socda.
Tan iyo daba yaaqadii sanaddii 2016 wadanka itoobiya waxaa ka socday kacdoonno shacbi oo saameyn ba’an ku reebay dhaqaalaha iyo ammaanka wadanka, qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu weyn wadanka ayaa ku kacdoontay taliska Addis Ababa kadibna waxaa kacdoonka ku biirtay qowmiyadda Amxaarada.
Dagaallo fool ka fool ah oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhadaha hubeysan ayaa ka socda qeybo badan oo katirsan gobollada wadanka, waxaana sii xoogeysanayay baaqyada ay dirayaan siyaasiyiinta wadanka oo ah in lakala furfuro nidaamka qowmiyadaha.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in R/wasaaraha iscasilay uu cadaadisyo siyaasadeed kala kulmayo saraakiisha Tigreega oo ah kuwa sida dhabta ah wadanka umaamula, illaa iyo hadda wax jawaab ah kamasoo bixin kooxaha mucaaradka oo ku aaddan in casilaadda Haillemariam ay ku riixi doonto joojinta kacdoonka iyo in ay sii wadi doonaan.
Dhinaca kale wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof lagu dilay isku dhacyo ka dhacay gobolka Oromia. kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in ciidamada boolisku ay toogteen dad shacab ah oo dhigayay dibad baxyo.
Waaxda socdaalka dalka Sweden ayaa iyana warbixin ay soo saartay waxay muwaadiniinteeda uga digtay in ay usafraan wadanka Itoobiya, Sweden waxay sheegtay in kacdoonka sii laba kacleeyay ee wadanka ka bilaawday uu qasab ka dhigayo in taxadar ay muujiyaan dadka Swedesh-ka ah ee cilaaqaadku kala dhaxeeyo dadka Itoobiyaanka ah.
Isbuucan gudihiisa digniin tan lamid ah waxay kasoo baxday safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa taas oo muwaadiniinteeda uga digtay in ay u safraan wadanka Itoobiya sababa laxiriiro cabsiyo dhanka ammaanka ah.